Speaking 001 (Beginner)
ဒီနေ့အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ နေ့စဉ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေမှာ အသုံးများတဲ့ အင်္ဂလိပ်အီဒီယံတစ်ခုအကြောင်း ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ တခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့နေရာကဝင်စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ တခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့အခြေနေအချိန်အခါ နဲ့ သူတို့ရဲ့အမြင်၊ နေရာကနေ တွေးဆကြည့်ပါလို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအီဒီယံလေးကိုတော့ ကိုယ်ချင်စားကြည့်ဖို့ ပြောချင်တဲ့အခါ သုံးကြပါတယ်။
ဒီနေ့အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ နေ့စဉ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေမှာ အသုံးများတဲ့ အင်္ဂလိပ်အီဒီယံတစ်ခုအကြောင်း ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Put yourself in somebody’s shoes ဒီစကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ တခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့နေရာကဝင်စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ တခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့အခြေနေအချိန်အခါ နဲ့ သူတို့ရဲ့အမြင်၊ နေရာကနေ တွေးဆကြည့်ပါလို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအီဒီယံလေးကိုတော့ ကိုယ်ချင်စားကြည့်ဖို့ ပြောချင်တဲ့အခါ သုံးကြပါတယ်။
Greeting Unit 1
Greeting အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ MyanLearn ရဲ့ Speaking for Elementary အစီအစဉ်ကနေ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့တဲ့အခါ နှုတ်ဆက်တဲ့နည်းလမ်း အချို့ကို ပြောပြပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ ဆူဇီက ဂျွန်ကို လှမ်းတွေ့လိုက်ပါတယ်။ လှမ်းတွေ့တဲ့အခါ နှုတ်ဆက်စကားပြောပါတယ်။ Hi, John ဟိုင်း ဂျွန် ရေ။ Hi, Suzy. Good morning. ဟိုင်း ဆူဇီ။ ကောင်းသော နံနက်ခင်းလေးပါ။ Good morning. How are you? ကောင်းသော နံနက်ခင်းပါ။ နေကောင်းလား။ I’m fine, thank you. And you? ငါနေကောင်းပါတယ်။ မင်းရော။ I’m fine, too, thanks. ငါလည်းနေကောင်းပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ How are you doing? အဆင်ပြေရဲ့လား Everything is okay. အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ် It’s nice to see you again! မင်းနဲ့ ပြန်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ It’s nice to see you, too. ငါလည်း မင်းနဲ့တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ ညနေခင်းတစ်ခုမှာ ဂျွန်က ဆူဇီကို လှမ်းတွေ့လို့ နှုတ်ဆက်ပြန်ပါတယ်။ Good evening, Suzy. ကောင်းသော ညနေခင်းပါ ဆူဇီ Good evening. I’m glad to see you again. ကောင်းသော ညနေခင်းပါ။ မင်းကို ထပ်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ Me, too. How is everything? ငါရောပဲ။ အခြေနေဘယ်လိုလဲ။ Everything is fine. How are you getting on? အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်။ မင်းရောဘယ်လိုလဲ။ Very well. How are your father and mother? အရမ်းကောင်းပါတယ်။ မင််းရဲ့ အဖေနဲ့အမေရော။ They are very well, thank you. သူတို့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပါပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ I must run. Goodnight. ငါ သွားရတော့မယ်။ ကောင်းသောညပါ။ Goodnight. ကောင်းသောညပါ။
ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ neither နဲ့ either ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လို negative agreement သုံးနိုင်လဲဆိုတာ ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးလေးတွေကတော့ အတိုကောက်အဖြေလေးတွေပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာကြည့်လိုက်ရအောင် တစ်ယောက်ယောက်က I don’t like to drive လို့ပြောတဲ့အခါ ကိုယ်ကလဲ သဘောတူတယ်၊ ကိုယ်လဲကားမောင်းရတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင် သူတို့နဲ့သဘောတူကြောင်းပြဖို့အတွက် စကားပြောနည်းလမ်းသုံးခုသုံးနိုင်ပါတယ်။ I don’t like to drive. Me neither. (I also do not like to drive) ငါလဲမကြိုက်ဘူး လို့သဘောတူကြောင်း ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ နောက်တစ်နည်းသုံးလို့ရတာက စာကြောင်းထဲက အကူကြိယာ do not ကိုကြည့်ပြီး I don’t either လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ အတူတူပါပဲ၊ ငါလဲမကြိုက်ဘူး လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာဘာကြောင့် အပေါ်မှာ Neither သုံးထားပြီးသားကို either ထပ်သုံးရလဲဆိုရင် စာကြောင်းကအငြင်းဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ နောက်တစ်နည်းကတော့ Neither do I ပဲဖြစ်ပါတယ်။ *I don’t လို့ပြန်ငြင်းတဲ့အခါ အကူကြိယာ ကအငြင်းကို either ကိုသုံးပြီးတော့ ရိုးရိုးပြန်ငြင်းမယ်ဆိုရင် neither ပဲသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းသုံးခုကတော့ ကိုယ်လဲမကြိုက်ဘူးပါလို့ ပြန်သဘောတူချင်တဲ့ Negative agreement တိုင်းမှာသုံးလို့ရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုနားလည်သွားအောင် နောက်ထပ်ဥပမာလေးဆက်လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါနော်။ I can’t skate. စကိတ်မစီးတတ်ဘူးလို့တစ်ယောက်ယောက်ကပြောတဲ့အခါ ကိုယ်ကလဲမစီးတတ်လို့ပြန်သဘောတူချင်ရင် ပထမပေးခဲ့တဲ့ဥပမာအတိုင်း Me neither (ငါလဲမစီးတတ်ဘူး) နောက်တစ်ခါ စာကြောင်းမှာအကူကြိယာဟာ can’t ဖြစ်နေတာကြောင့် I can’t either လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်နည်း ထပ်ပြောချင်ရင်တော့ Neither can I လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ အပေါ်မှာတုန်းက do not မို့ကိုယ်ပြန်ပြောတဲ့အခါ do not ပြန်သုံးပြီး Can’t ကိုတွေ့တဲ့အခါ မှာ ပြောင်းလဲပြောဆိုရပါမယ်။ ကောင်းပါပြီ ဒီနေ့ပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ အကူကြိယာသက်သက်ပဲပါတဲ့အငြင်း ဝါကျကို သဘောတူးကြောင်းပြန်ပြောတဲ့စကားစုလေးတွေကို တင်ဆက်ပေးခဲ့တာ ပဲဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ အကူကြိယာရော၊ အဓိကကြိယာ ကြိယာ ရောပါတဲ့အခါ negative agreement တွေကိုဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးဦးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရူ့ပေးကြပါဦးနော်။
အခုတစ်ခါ ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ "ခွင့်တောင်းခြင်း" နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အင်္ဂလိပ်လိို ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကို သင်ပြပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ "ခွင့်တောင်းခြင်း" ဆိုတာကို မြန်မာလိုပဲ ပြန်ပြီး ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ကိစ္စတစ်ခုခုအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်တောင်းတာမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာမှာတော့ ခွင့်တောင်းတဲ့နည်းလမ်း အခြေခံအားဖြင့် ၃ခုရှိပါတယ်။ ပထမတစ်နည်းက "Can I + ....." ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်နညး်ကတော့ "Could I + ....." ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး တတိယနညး်ကတော့ "May I + ....." ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ၃ခုစလုံးကတော့ ခွင့်တောင်းတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုဖို့ကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ "May I + ....." ကတော့ အယဉ်ကျေးဆုံး နညး်လမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သင့်ထက် ပိုပြီးတော့ အသက်ကြီးတဲ့သူ၊ ရာထူးကြီးတဲ့သူ၊ ဂုဏ်ကြီးတဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် သင်လေးစားတဲ့သူတွေဆီက ခွင့်တောင်းမယ်ဆိုရင် "May I + ....." ကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင်နဲ့တခါမှ မဆုံဖူးတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်ကို ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း ယဉ်ကျေးသမှုအနေနဲ့ "May I + ....." ကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဥပမာ စာကြောင်းလေးတွေကို ကြည့်ကြည့်ကြရအောင်.... Can I help you? (မငး်ကို ငါကူပေးရမလား) Could I speak to Mr. Kim? (မစ္စတာကင်မ်နဲ့ စကားပြောလို့ ရမလား) May I have some water? (ကျွန်တော့်အတွက် ရေလေးအနည်းငယ်မျှ ရနိုင်မလား) စသဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သတိထားပြီးကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Can I, Coul I, May I စတာတွေရဲ့နောက်မှာ verb ကို တွဲပြီး အသုံးပြုပါတယ်။ ဥပမာ "သွားခွင့်ရမလား" လို့ မေးချင်ရင် "May I go?"၊ "ရွှေ့လို့ရမလား" လို့ မေးချင်ရင် "Can I move?" စသဖြင့် ခွင့်တောင်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းပါပြီ ဒီနေ့လေ့လာခဲ့တာကတော့ ခွင့်တောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးအနူန်းတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
Negative Agreement (Neither , either)
ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ Negative agreement တွေကို အတိုကောက်စကားပြော တွေနဲ့ဘယ်လို ငြင်းနိုင်လဲ ဆိုတာ ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းမှာ သင်ခန်းစာတွေတုန်းက အကူကြိယာ သက်သက်ပဲ ပါတဲ့ဝါကျတွေအတွက် ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီတစ်ခါမှာတော့ အကူကြိယာရော၊ အဓိကကြိယာရောပါ တဲ့အခါ ဘယ်လိုပြောနိုင်လဲဆိုတာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခုကိုအရင်ကြည့်လိုက်ရအောင် I don’t haveacar. ဒီစာကြောင်းမှာ အကူကြိယာ ဖြစ်တဲ့ do ရော အဓိက ကြိယာ have ကောပါဝင်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် နည်းလမ်းသုံးခုနဲ့ negative agreement ကိုပြန်သုံး တဲ့နေရာမှာ အကူကြိယာကိုပဲ ပြန်ယူသုံးရပါမယ်။ Me neither ကတော့ ဘယ်လို negative agreement တိုင်းမဆိုသုံးလို့ရတာမို့ အထွေအတူးမရှင်းတော့ပါဘူး။ အကူကြိယာကိုပဲပြန်ယူသုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် I don’t either Neither do I နောက်ထပ်ဥပမာလေးဆက်လေ့လာကြည့်ရအောင် I haven’t seen Titanic. Me neither ဒီနေရာမှာတော့ have ကအကူကြိယာ၊ seen ကို အဓိကကြိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကူကြိယာကိုပဲပြန်ယူသုံးရပါမယ်။ I haven’t either Neither have I *ဒီနေရာမှာမှာ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူတိုင်းကိုနားလည်စေချင်တာက Negative agreement တိုင်းကို Neither do I နဲ့သုံးနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ စာကြောင်းရဲ့အကူကြိယာကိုကြည့်ပြီးတော့မှ ပြန်လည်အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးဥပမာ တစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် Jin can’t have peanuts. ဂျင်က မြေပဲစားလို့မရဘူး။ သူ့မှာဓာတ်မတည့်တာတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ဒီစာကြောင်းလေးကို ကိုယ်လဲ မြေပဲစားလို့မရသူပဲ ဟုတ်တယ်လို့ သဘောတူချင်တဲ့အခါ ဒီနေရာမှာ အကူကြိယာက can ဖြစ်တာကြောင့် အတိုကောက် negative agreement တွေသုံးတဲ့အခါ Me neither I can neither Neither can I ကောင်းပါပြီ ဒီနေ့လေ့လာခဲ့ကြတာကတော့ either, neither သုံးပြီးပြန်ပြောတဲ့ Negative agreement တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
Good vs Well ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ အင်္ဂလိပ်စကားမျိုးအများစုမှာ သုံးကြတဲ့Good နဲ့ well ကိုနေရာမှန်မှန်သုံးတတ်အောင် ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေမှာ How are you လို့နူတ်ဆက် တဲ့အခါ I’m good. I’m well လို့နှစ်ခုလုံးသုံးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစကားလုံးတွေဟာ ဘယ်တစ်ခုက adj ဖြစ်တယ် ဘယ်တစ်ခု adv ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သတိပြုမိတာနည်းကြပါတယ်။ ဥပမာလေးတွေ လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင် Did you see the game? Yeah, they played good/well. မင်းကစားပွဲကိုကြည့်ခဲ့လား ဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးမှာတော့မေးသူက ကစားပွဲ ကဘယ်လိုလဲ ဘယ်လိုကစားခဲ့ကြလဲ ဆိုတာမေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြေတဲ့အခါ သူတို့ကောင်းကောင်းစကားခဲ့ပါတယ်လို့ပြန်ဖြေရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် သိထားရမှာက Good က adj ပါ Well, ကတော့ adv ဖြစ်ပါတယ်။ Yeah, they played good လို့ဖြေလိုက်ရင် Good က adj ဖြစ်နေတဲ့အတွက် grammar အရမှားပါတယ်။ Adj ဟာ နာမ်တွေကိုပဲအထူးပြုပေးပါတယ်။ Adv ကတော့ ကြိယာတွေကို အထူးပြုပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်Played ဆိုတဲ့ ကြိယာနောက်မှာ adv ပဲလိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်They played well လို့ဖြေမှ မှန်ကန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာမှတ်ထားရမှာက good ဟာ adj ဖြစ်တယ်။ Well, ကတော့ adv အဖြစ်ရော၊ adj အဖြစ်ရောပါလက်ခံနိုင်တဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ You look sick. Are you ok? I don’t feel well. ဒီလိုစာကြောင်းမျိုးမှာတော့ မေးခွန်းမေးတဲ့သူနဲ့ အဖြေဖြေတဲ့သူရဲ့အခြေအနေကို အရင်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ မေးသူက စိတ်ခံစားမှုပိုင်း ကိုအလေးပေးပြီး အဆင်ပြေလားနေကောင်းလား မေးတဲ့အခါ I’m good လို့ဖြေတာ ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ မေးသူက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို အလေးပေးပြီး နေကောင်းလား အဆင်ပြေလားမေးတဲ့အခါမှာတော့ I’m well လို့ဖြေတာ ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ ကောင်းပါပြီ ဒီနေ့လေ့လာခဲ့တာကတော့ good နဲ့ well ရဲ့အသုံးပြုပုံတွေဖြစ်ပါတယ််။
Introduction Unit 2
Introduction Unit2ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စပြီး စကားပြောတဲ့အခါ ဘယ်တွေစတင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ Introduction အသုံးအနူန်းတွေကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ John, have you met Mr.Kyaw? ဂျွန် မင်း ကျော်နဲ့ဆုံဖူးလား။ No. ဟင့်အင် This is Mr. Kyaw Kyaw. ဒါက ကျော်ကျော်ပါ။ How do you do, Mr. Kyaw? မင်္ဂလာပါ ကျော် How do you do? မင်္ဂလာပါ My name is John, John Smith. ကျွန်တော်နာမည်က ဂျွန်ပါ၊ ဂျွန်စမစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ It’s nice to meet you. Where are you from? တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ မင်းကဘယ်မှာနေလဲ။ I’m from America. I’m glad to meet you, too. ကျွန်တော်က အမေရိက ကပါ။ ကျွန်တော်လဲတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ John, this is Mya Mya, my good friend. Have you met before? ဂျွန် ဒါကမြမြလေ။ ငါ့ရဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းပါ။ အရင်ကတွေ့ဖူးလား No. How do you do Miss Mya Mya? ဟင်အင်၊ မင်္ဂလာပါ မြမြ။ How do you do? မင်္ဂလာပါ။ This is my wife Mary. ဒါကကျွန်တော့်အမျိုးသမီး မယ်ရီပါ။ Very glad to meet you. Are you from Canada? တွေ့ရတာအရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ မင်းက ကနေဒါကလား။No. We come from America. မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က အမေရိက ကပါ။ John, the man over there is our manager. Let’s go and meet him. ဂျွန် ဟိုမှာရပ်နေတာ ငါတို့မန်နေဂျာလေ။ သွားတွေ့ရအောင်။ Mr. Mg Mg, this is Mr. John Smith from America. မောင်မောင် ဒါက အမေရိက က ဂျွန်စမစ်လေ။ It’sagreat honor to meet. တွေ့ရတာအရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ Me too. ကျွန်တော်ကောပါပဲ။
Job Unit 3
Job Unit3What's your job, Miss Mya Mya? မင်းဘာလုပ်လဲမြမြ I'masecretary. I work foracar company. ကျွန်မက အတွင်းရေးမှုူပါ။ ကားကုမ္မဏီတစ်ခုအတွက်အလုပ်လုပ်ပါတယ် That'savery nice job. ဒါသိပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ Yes, it is. I like my job. What do you do? ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်မက ကျွန်မအလုပ်ကို ကြိုက်တယ်။ ရှင်ကရောဘာလုပ်လဲ I haveagood job inabig company. I work asasales manager. ကျွန်တော်အလုပ်က ကုမ္မဏီကြီးတစ်ခုမှာပါ။ ကျွန်တော်က အရောင်းမန်ဂျေဂျာလုပ်ပါတယ်။ Sales manager? That'savery interesting job. အရောင်းမန်နေဂျာလား။ ဒါသိပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ။ Yes, I like it. ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲကြိုက်တယ်။ Tell me, Miss Su Su, what's your job? စုစုကရော ဘာလုပ်လဲလပြောပါဦး။ I haveajob inabank, Bank of China. ကျွန်မက ဘဏ်တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Bank of China ပါ။ Oh, that'savery good job. ဒါသိပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ Yes, I like it. They say you work forabig company. ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်မသဘောကျတယ်။ သူတို့က မင်းကုမ္မဏီးကြီးမှာအလုပ်လုပ်တာပဲလို့ပြောကြပါတယ်။ Yes, very big. I work for IBM. I'masales manager. ဟုတ်ပါတယ်။ အရမ်းကြီးတဲ့ကုမ္မဏီပဲ။ ကျွန်တော်က IBM အတွက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အရောင်းမန်နေဂျာပါ။ Oh, that's very interesting. ဒါသိပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲ Very challenging, too. စိန်ခေါ်မှုလဲသိပ်များတယ်ဗျ
Family Unit4Tell mealittle about your family, Mr. Kyaw. မင်း၇ဲ့မိသားစုအကြောင်းပြောပါဦး ကျော်ကျော် We have three people in our family, my wife, my daughter and me. ကျွန်မှာမိသားစုသုံးယောက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီး၊ သမီးလေးနဲ့ကျွန်တော်ပါ။ I'm sure it isahappy family. ဒါပျော်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုပဲဖြစ်မယ်နော် Yes, it is. How many people are there in your family? ဟုတ်ပါတယ်။ မင်းရဲ့မိသားစုမှာတော့ မိသားစုဝင်ဘယ်လောက်ရှိလဲ We areafamily of four. We have two children,ason andadaughter. ကျွန်မတို့ကမိသားစုလေးယောက်ပါ။ ကလေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သားတစ်ယောက်နဲ့သမီးတစ်ယောက်ပါ။ How old are your children? မင်းရဲ့ကလေးတွေအသက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ Our son Tun Tun is ten and Soe Soe, our daughter, is only three. They are very nice children. ကျွန်မတို့သားလေးထွန်းထွန်းကတော့ဆယ်နှစ်ပါ။ စိုးစိုးက သမီးလေး သုံးနှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ သူတို့က လိမ္မာတဲ့ကလေးတွေပါ။ These are my family photos. ဒါကတော့ ကျွန်တော်မိသားစုဓာတ်ပုံတွေပါ။ May I havealook? ကျွန်မတစ်ချက်လောက်ကြည့်လို့ရမလား This is my wife, Mary, with two children. And this one, the four of us in front of our house. ဒါက တော့ ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီး မယ်ရီ ပြီးတော့ဒီတစ်ခုက ကျွန်တော်တို့လေးယောက်ပုံ ။ အိမ်ရှေ့မှာပါ။ It isavery nice house. You haveahappy family. ဒါကသိပ်မိုက်တဲ့အိမ်ပဲ။ရှင်မှာ ပျော်စရာမိသားစုလေး၇ှိတယ်နော်။
Nature and the Environment - Unit 1 A Picnic by the River Suzy: This isagood spot. Let's stop and have our picnic next to the river. ဒါက အားကစားကောင်းတစ်ခုပဲ။ ရပ်ပြီး မြစ်ဘေးမှာ ပျော်ပွဲစားထွက်ကြမလား John: Good idea. Walking always makes me hungry. I'm ready for lunch. အကြံကောင်းပဲ။ လမ်းလျှောက်တာက ကျွန်တော့်ကိုဗိုက်ဆာစေတယ်။ နေ့လည်စာ စားဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ Suzy: We can sit here on the grass. Oh on! Someone forgot to throw these empty paper bags away. There is litter everywhere! ငါတို့ မြက်ခင်းပေါ်ထိုင်လို့ရတယ်။ အို တစ်ယောက်ယောက်က ဒီစာရွက်အလွတ်တွေကို လွင့်ပစ်ဖို့မေ့ကျန်ခဲ့တယ်။ နေရာတိုင်းမှာ အမှိုက်တွေချည်းပဲ။ John; Why do people leave litter around? It's notanice thing to do. It spoils other people's picnics. လူတွေဘာကြောင့် အမှိုက်ချကြတာလဲ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့တော့မကောင်းပါဘူး။ ဒါက တခြားလူတွေရဲ့ ပျော်ပွဲစားအစီစဉ် ကိုပျက်စီးစေတယ်။ Suzy; I think they are lazy. Or maybe they just don't care. သူတို့ပျင်းတာလို့ကျွန်မထင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ဂရုမစိုက်တာပါ။ John; People should clean up before they leave. သူတို့မသွားခင်မှာ လူတွေက သန့်ရှင်းခဲ့သင့်တယ်။ Suzy; That's right. Well, after our picnic, let's pick up all the litter we can and take it out of here. ဒါဟုတ်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ ငါတို့ပျော်ပွဲစားပြီးရင် ဒီအမှိုက်အားလုံး ငါတို့တတ်နိုင်သလောက် ကောက်ကြရအောင် John; Ok! And next week, let's come back with friends and pick up some more. ကောင်းပြီး နောက်တစ်ပတ် နောက်တစ်ခါသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်လာပြီးတော့ အမှိုက်ကောက်ကြဦးမယ်။ Suzy; Good Idea! အကြံကောင်းပဲ။